FANAMBARAN’NY EVEKA : “Politika mifototra amin’ny lainga sy kobaka am-bava no misy eto”
Notsikafonin’ny fivondronam-ben’ny Eveka tamin’ny alalan’ny fanambaràna navoakan’izy ireo ny faran’ny herinandro lasa teo ny tsy fahaiza-manaon’ny mpitondra fanjakana amin’izao fotoana izao. 20 novembre 2017
Tsy nihambahamba izy ireo raha nilaza fa tsy misy afatsy ny politika mifototra amin’ny lainga sy kobaka am-bava eto amin’ny tany sy ny firenena.
Latsaka an-katerena tanteraka ny vahoaka Malagasy. Miaina ao anaty fahantrana faran’izay lalina ny ankamaroan’ny vahoaka kanefa tsy hita izay vahaolana mazava mifandraika amin’izany. Ankoatr’izay dia nasian’izy ireo tsindrim-peo ihany koa ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay mbola ifampitadiavana ny vahaolana hatramin’izao sy ny kolikoly miha mavesa-danja isan’andro. “Mikoroso fahana tanteraka ny fiainantsika Malagasy ankehitriny, mbola mahazo tatitra maro mampihoron-koditra izahay noho ny fikorontanan’ny toetrandro sy ny toetany, noho ny haintany mafy be, noho ny fitiavan-tena sy ny politikan’ny samy maka ho azy dia mbola mahazo vahana tanteraka ny fahantrana, ny tsy fandriam-pahalemana izay mampandry tsy lavo loha ny maro ka mampitombo ny tebiteby marain-tsy hariva.
Fifandraisan’ny samy mpiara-belona feno tsy fifampitokisana mihanaka any amin’ny seha-piainana manontolo ny kolikoly ary ny vidim-piainana tsy mitsaha-mitombo. Tena mahazo toerana fara-tampony ny fitiavan-tena sy ny fanompoana ny vola”, hoy ny ampahany voalaza tao anatin’ilay fanambaran’ny Eveka. Raha fehezina dia ny mahararin’ny vahoaka mihitsy no tsy ahitam-bahaolana hatreto. Any amin’ny tsy laharam-pahamehana hatrany no mahamaika ireo mpitondra dia ny fitadiavana ny fomba rehetra hifikirana eo amin’ny sezany. Porofo mivaingana ao anatin’izany ireny fizarana fitaovam-pianarana ho an’ny mpianatra tetsy Atsonjombe ireny izay heverin’ny maro fa tsy mamaha na inona na inona fa endrika noentina nisehosehoana fotsiny ihany. Mandinika ny fiainam-pirenena ireo raiamandreny eo anivon’ny fiangonana ary mahita fa toy ireo zaza kamboty tsy misy mpiahy ny vahoaka Malagasy.
Tao anatin’ity fanambaràna ity, basy atifi-kavana ny an’ireo Eveka ka avy hatrany dia narangarangany, izay miantefa mivantana any amin’ireo mpanao politika fa indrindra ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ity farany izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny fiainam-bahoaka ary tompon’andraikitra ihany koa amin’ny fitadiavam-bahaolana eo amin’ireo lafin-javatra maro mampikorotan-tsaina ny rehetra amin’izao. Voalaza tao anatin’ity fanambaràna ity anefa fa toa kobaka am-bava no betsaka, fampanantenana poakaty fotsiny ihany ary matetika toa kabary ambony latabatra mampanantena tsy misy ny rehetra.
“Ny zava-misy eto amintsika amin’izao dia politika mifototra amin’ny lainga sy ny kobaka am-bava no mibaribary ho hitam-bahoaka. Tsy misy fanompoana fa fitadiavan-karena an-kolaka no manjaka, kolikoly avo lenta, ny vola sy ny fahefana no mibaiko. Tsy ny fahaizana sy ny fahendrena intsony no entina mampandroso ny firenena. Tsy voafehy intsony ny momban’ny fananan-tany hany ka maro be ireo tany nolovaina tamin’ny razana no very na amidy amin’ireo vahiny avy any ivelany mihitsy aza. Lasa miady ary mifampitory ny mpianakavy”, hoy hatrany ilay fanambaràna.
Mavesatra ny tenin’ireo raiamandreny manoloana ny zava-misy ankehitriny, indrindra fa ny afitsoky ny mpitondra sy ireo mpanao politika mpamadika palitao. Manoloana ny fanambaràna tahaka izao anefa dia manao bemarenina hatrany ny mpitondra izay mandray izany ho fanakianana azy ireo hany ka rehefa misy ny fitokanana zava-bita kely dia miezaka manindro-paingotra ireo mpanohitra hatrany ao anatin’ny kabary. Ho avy izao ny fifidianana dia ho avy tahaka izany ihany koa ny fampanantenana poakaty ataon’ireo mpitondra izay efa zatra manao izany.
“Ho tonga ity ny fifidianana, hiharihary amin’ny fampielezan-kevitra indray ve ny fampanantenana poakaty, ny fampifandrafesana sokajin’olona samihafa. Ny fanaparitahana vola amitahana olona. Tsarovy fa ny teny manaitra fa ny hatao no mahasarika”, hoy ireo Eveka namarana ny fanambaràna.
2017-11-20 19:55:06 par bordeaux 33000
MBA mihetseha manongana fa UEFA mankaleo mahita fanomezantsiny tsy met y hit à hetsika ataonareo.UEFA Mary andrano ery dodo kapokapoka foa karaha MBA solo hagnanoraha igny
2020-09-28 17:52:44 par Royal CBD
jvy4dG Just what I was searching for, appreciate it for putting up.